Home Wararka Waa maxay sababta uu MW Farmajo uu Shisheeyaha ugu Tacsiyadeeyo, Somalidana uu...
Waa maxay sababta uu MW Farmajo uu Shisheeyaha ugu Tacsiyadeeyo, Somalidana uu u Diido inuu Xanuunka la Qeybsado?
Waa dareen naxdin iyo calool xuma leh Sababta ka reebta Madaxweyne Farmajo inuu uga tacsiyadeeyo marka dad Soomaliyeed oo waliba hogaan xumadiisa lagu laayey , balse daqiiqada ka dib waxa ka dhaca dalal kale iyo ummado kale uu ugu tacsiyadeeyo?
MOL waxay u weysa qiil iyo wax sabab looga dhigi karo hasa yashee waxay goosatay inay shacbiga Somaliyeed la wadagto dareenkaas. Runtii waa musiibo na haysataa in Madaxweynaheennu uusan ka warqabin, ka nixicin , ka calool xumaan marka hilbaha masaakiin Somaliyeed hogaan xumadiisa lagu jarjaro, laguna gubo.
MW Farmajo kalam kama oran seddexdii qarax ugu dambeeyeey ee ka dhacay hotel Saxafi iyo Number afar oo ay ku dhinteen 60 ka qof, kaas oo xataa farac jar u muuqday, kadib markii wiilkii dhaxlay hoteel saxafi lagu dilay halkii aabihii Allah ha u naxaristee lagu dilay oo aysan wax xanuun ah ku qaban Farmajo.
Markii Addis Abeba meel uu Abiy ka hadlayey wax lagu qarxiyey daqiiqado kadib waxaa uu tiray Tacsi murugu leh oo uu ciil iyo xanuun dareemayey u diray.
Waxaa shalay cadowga Shabab ay gaadmo iyo jid u gal ku dileen 10 askari oo ka tirsan ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed. MW Farmaajo wuxuu isla shalay tacsi u diray shacabka Ugandha kaddib markii ay dooni ay saarnaayeen dalxiisayaal ay ku degtay lake victoria.
Waa ayaan darro iyo niyad jab ku dhacay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka qalabka sida.
Tolow muxuusan u kala jeclayn marka dadka Somaliyeed ay wax gaaraan, iyadoo waliba u yahay mas’uulka ugu sarreeya dalkan ee ay dusha naga saareen barlamanka aan mas’uuliyadooda ah inay naga dulqadaan ah aan garan.
Maaha khalad in ummadaha dunida lala qeybsado xaaladaha adag ee soo mara, hasa yeeshee marka reera shisheeye meyd galo oohin ha laguugu celin waayo, marka gurigaaga uu ka dhacana is xarragoo oo iska safar sidii aysan waxba dhicin xataa dabbaalnimo waa ka weyn tahay waa doqonimmo waalli dugsan oo aan dareen lahayn.
Bal u fiirso tacsidan:
Previous article(Caddeyn) caddeyn u ah heerka musuq-maasuqa Yariisow iyo baaritaanka uu sameeyey hanti-dhowrka
Next articleRoobow oo ay u badan tahay in uu ku guuleysto KG iyo DF oo ku ceebowday hal arrin
DEG DEG :-Qarax Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Ciidanka DFS ee ku sugan degmada Baardhere oo soo bandhigay labo...